परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घट्यो, चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्यमा सर्वाधिक गिरावट
वैशाख ६, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिनदेखिनै ओरालो लागेको शेयर बजार दोस्रो दिन पनि घटेर बन्द भएको छ ।
आइतवार १ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् ३५ दशमलव ८९ अंकले घटेर २ हजार ६९९ दशमलव ५१ विन्दुमा बन्द भएको बजार २ हजार ७१६ दशमलव २४ विन्दुदेखि खुला भएको थियो । सोमवार, आइतवारको तुलनामा १ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात ३७ दशमलव ५८ अंक घटेर बजार २ हजार ६६१ दशमलव ९३ विन्दुमा बन्द भएको हो ।
यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १ दशमलव ४५ प्रतिशत घटेर ४७९ दशमलव १० विन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा सेन्सेटिभ इन्डेक्स ७ दशमलव शून्य ६ अंक घटेको हो ।
अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा सोमवार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । आइतवार रू. ८ अर्ब ८० करोड १८ लाख ३ हजार बराबरको १ करोड ९५ लाख २८ हजार ६५६ कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा सोमवार रू. ६ अर्ब ७६ करोड ६८ लाख १ हजार बराबरको १ करोड ४२ लाख ७६८ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यो कारोबार २१३ ओटा कम्पनीको ७३ हजार ५८२ पटकको व्यापारमा भएको हो ।
यसदिन नागरिक लगानी कोषको सबैभन्दा बढी रकमको शेयर खरीदविक्री भएको छ । कोषको रू. २८ करोड ३४ लाख ४७ हजार बराबरको ७१ हजार ४४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य भने २ दशमलव ९४ प्रतिशत घटेको छ । प्रतिकित्ता रू. १२१ ले घटेर नागरिक लगानी कोषको शेयरमूल्य रू. ३ हजार ९९४ कायम भएको हो ।
सोमवार जलविद्युत् र वित्त समूहका लगानीकर्ताहरुले कमाएका छन् । यो दिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहगत परिसूचकमध्ये वित्त समूहको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत र जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव १२ प्रतिशत बढेको हो ।
यो दिन होटल्स तथा पर्यटन समूहको परिसूचक सर्वाधिक ६ दशमलव १७ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै व्यापारिक समूहको २ दशमलव ९ प्रतिशत, बैंकिङ्को १ दशमलव ८६ प्रतिशत, विकास बैंकको १ दशमलव ९४ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव ७७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव ३२ प्रतिशत, लघुवित्तको १ दशमलव १८ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
सोमवारको कारोबारमा ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स र महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ भने चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको सर्वाधिक घटेको छ । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशत र महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९४ प्रतिशत बढेको हो ।
उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ६२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ६८३ पुगेको छ भने महिला लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. १३२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ४६० पुगेको छ ।
सोमवार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्यमा भने ९ दशमलव ८० प्रतिशत गिरावट आएको छ । यो दिन कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २३६ ले घटेर रू. २ हजार १७३ मा झरेको हो । कम्पनी चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १८ करोड ११ लाख २० हजार खुद नोक्सानीमा रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खुद नोक्सानी बढेको छ ।
गत वर्ष यो अवधिसम्म कम्पनी रू. २ करोड १८ लाख ८ हजार नोक्सानीमा रहेको थियो । खुद नोक्सानी बढेको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीको शेयर विक्री चाप बढेकाले मूल्यमा असर परेको हो ।